Mesh Qurxinta Shiinaha ee Dhismaha Warshadeynta Dharka iyo alaab-qeybiyeyaasha. Boegger
Dhisidda Mesh Qurxinta Dharka
Mesh silig qurxin leh ayaa si khaas ah loogu tolan karaa bir birta ah oo aan tayo sare lahayn, aluminium isku darsan, naxaas ah, naxaas ama waxyaabo kale oo daawaha ah. Dharka mesh silig ee birta ah ayaa hadda qabanaya indhaha naqshadayaasha casriga ah. Waxaa si ballaadhan loogu adeegsadaa daahyada, shaashadaha hoolka cuntada, go'doominta hoteelada, qurxinta saqafka, xakamaynta xoolaha iyo deyrka amniga, iwm.
Iyada oo ay tahay kala duwanaansho, muuqaal gaar ah, midabyo kala duwan, adkeysi iyo dabacsanaan, dharka mesh silig bir ah ayaa bixiya qaab qurxin casri ah oo loogu talagalay dhismooyinka. Marka loo isticmaalo sida daahyada, waxay bixisaa noocyo kala duwan oo midabbo ah oo iftiin leh waxayna siisaa male aan xad lahayn.
Qalabka loo yaqaan 'Wall Cladding Mesh Qurxinta': birta aan xarka lahayn, aluminium, naxaas, naxaas fosfowr, iwm.
Hore: Birta la Ballaadhiyay ee Dhismaha Lagu Caawiyey Waxay Ka Caawineysaa Yaraynta Dhawaaqyada.
Xiga: Muraayadaha Dahaarka Birta
Daloolinta Birta daloollan ayaa Haysa Dhismaha ...